त्यत्तिकै टुंगियो डा. गोविन्द केसीको अनशन - Dainikee News::
त्यत्तिकै टुंगियो डा. गोविन्द केसीको अनशन
काठमाडौँ, माघ १८ । चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा गोविन्द केसीले आज आफ्नो अनशन अन्त्य गगरेका छन् ।
अनशनस्थल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर केसीले अनशन अन्त्य गरेका हुन । डा केसीले अनशन बसेको २४ औँ दिनमा अनशन तोडेको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका सफाई कर्मचारी अमृत पूजारी र पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले केसीलाई जुस खुवाई अनशन तोडाएका हुन् ।
सो क्रममा डा केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पास भइसकेको अवस्थामा अनशन जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने, बिरामीले थप दुःख पाउने र राज्यले नसुन्ने अवस्था आएकाले अनशन तोडेको बताए । उनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकले नसमेटेका आफ्ना माग पूरा गर्न फरक ढङ्गले सङ्घर्ष गर्ने बताए । डा केसीले इलाम पुगेर अनशन शुरु गरेका थिए । अनशनकै क्रममा उनको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर देखिएछि सरकारले डा केसीलाई थप उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल ल्याएको थियो ।
डा केसीले राखेका माग राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ ले सम्बोधन गरिसकेको भन्दै सरकारले पटकपटक अनशन तोड्न आग्रह गरेको थियो । यसअघि आजै पूर्वविशिष्ट व्यक्तिले डा केसीसँग भेट गरी अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १८, २०७५ /Friday, February 1st, 2019, 2:02 pm
पशुपतिमा थन्किए चारलाख प्रतिबन्धित भारु
जथाभावी फोहोर फ्याक्ने पक्राउ